Woana Nye Jesus Christ? | Asɛmpa
1. Osii dɛn na Jesus baa nkwa mu?
Ebɛn suban na Jesus wɔ a ɔmaa nkorɔfo tumii bɛɛn no?​—MATTHEW 11:29; MARK 10:13-16.
Nyimpa biara nnyi hɔ a ɔtse dɛ Jesus osiandɛ ɔtsenaa ɔsor dɛ ɔbɔfo ana wɔrowo no wɔ asaase do. (John 8:23) Ɔno nye Nyankopɔn n’abɔdze a odzi kan, na ɔboae ma wɔbɔɔ ndzɛmba a wɔaka nyina. Ɔno nkotsee nye obi a Jehovah bɔɔ no tsenn, dɛm ntsi ɔsɛ fata dɛ wɔfrɛ no Nyankopɔn ne Ba “kortoo” no. (John 1:14) Nna Jesus yɛ Nyankopɔn ne Kasamaafo, dɛm ntsi wɔsan frɛ no “Asɛm no.”​—Kenkan Mbɛbusɛm 8:22, 23, 30; Colossaefo 1:15, 16.
2. Ebɛnadze ntsi na Jesus baa asaase do?
Nyankopɔn somaa ne Ba no baa asaase do dze nam no nkwa a ɔdze bɛhyɛɛ Jewnyi ɔbaabun bi a wɔfrɛ no Mary awotoa mu no do. Ntsi Jesus ennya honam afamu egya biara. (Luke 1:30-35) Jesus baa asaase do (1) dɛ ɔrebɛkyerɛkyerɛ hɛn Nyankopɔn no ho nokwasɛm, (2) dɛ ɔrebɛyɛ nhwɛdo ama hɛn ma yeesũa mbrɛ yebotum ayɛ Nyankopɔn n’apɛdze ber mpo a yɛwɔ ahokyer mu no, nye (3) dɛ ɔdze no nkwa a ɔyɛ pɛr no bɛma dze aayɛ “werdam” ama adasamba.​—Kenkan Matthew 20:28.
3. Ebɛnadze ntsi na yehia werdam?
Werdam yɛ biribi a wotua dze gye obi fi owu afɔbu mu. (Exodus 21:29, 30) Nna owu na nkɔkorabɔ nye mberwabɔ nnkã Nyankopɔn no botae a ɔwɔ ma adasamba no ho. Yesi dɛn hu dɛm? Nyankopɔn see nyimpa a odzi kan Adam dɛ, sɛ ɔyɛ dza Bible no frɛ no “bɔn” a, obowu. Ntsi sɛ Adam annyɛ bɔn a, nkyɛ onnkowu ara da. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Dɛ mbrɛ Bible no kyerɛ no, ɔnam Adam do na owu “baa” nyimpa nyina do. Ntsi, Adam dze bɔn nye n’akatua owu gyaa n’asefo nyina. Yehia werdam a obotum agye hɛn efi owu afɔbu a yenyae fii Adam hɔ no mu.​—Kenkan Romefo 5:12; 6:23.
Woana botum etua werdam no dze agye hɛn efi owu afɔbu ase? Sɛ yewu a, yetua hɛnankasa bɔn ho kaw. Nyimpa biara nnkotum etua ne nyɛnko bɔn ho kaw.​—Kenkan Ndwom 49:7-9.
4. Ebɛnadze ntsi na Jesus wui?
Nyimpa biara nntse dɛ Jesus osiandɛ nna ɔyɛ nyimpa a ɔyɛ pɛr. Ɔannyɛ bɔn da ntsi nna onnhia dɛ obowu wɔ no bɔn ho. Mbom no, hɛn bɔn ntsi na Jesus wui. Nyankopɔn daa no dɔ soronko edzi kyerɛɛ adasamba dze nam ne Ba a ɔsomaa no ma obowui maa hɛn no do. Jesus so daa ɔdɔ edzi kyerɛɛ hɛn dze nam setsie a ɔyɛe maa n’Egya na ɔdze no nkwa mae dze tuaa hɛn bɔn ho kaw no do.​—Kenkan John 3:16; Romefo 5:18, 19.
Hwɛ video a wɔato dzin Ebɛnadze Ntsi Na Jesus Wui?
5. Sesei ebɛnadze na Jesus reyɛ?
Ber a nna Jesus wɔ asaase do no, ɔsaa ayarfo yarba, onyaan ewufo, na ɔgyee hɔn a nna woruhu amandze no. Ɔyɛɛ dɛm dze kyerɛɛ dza ndaamba ɔbɛyɛ ama adasamba asomberɛwfo nyina. (Matthew 15:30, 31; John 5:28) Jesus no wu ekyir no, Nyankopɔn nyaan no na ɔmaa no nkwa dɛ sunsum abɔdze. (1 Peter 3:18) Jesus kɛtsenaa Nyankopɔn n’abanyimfa tweɔnee kesii dɛ, Jehovah maa no tum dɛ ondzi Hen wɔ asaase nyinara do. (Hebrewfo 10:12, 13) Seseiara dze, Jesus ridzi tum dɛ Ɔhen wɔ sor na n’ekyirdzifo nyina robɔ asɛmpa a ɔfa n’Ahendzi no ho dawur wɔ wiadze mfɛndzanan nyina.​—Kenkan Daniel 7:13, 14; Matthew 24:14.
Ɔnnkɛkyɛr, Jesus dze no tum a ɔwɔ dɛ Ɔhen no bedzi dwuma dze eeyi amandzehu nye hɔn a wɔdze ba nyina efi hɔ. Hɔn a wɔbɛgye Jesus edzi dze nam setsie a wɔbɛyɛ ama no no benya onnyiewiei nkwa wɔ paradise wɔ asaase do.​—Kenkan Ndwom 37:9-11.
Werdam no​—Nyankopɔn n’Akyɛdze a Ɔsom Bo Paa
Ebɛnadze nye werdam no? Ibesi dɛn enya do mfaso?
Fa mona Fa mona Woana Nye Jesus Christ?